Ifayibha Laser Machine, Cnc Fibre Laser, Ifayibha Laser abasiki - Guo Hong
Ifomathi enkulu evaliweyo yokutshintshela itafile yomatshini wokusika we-laser isebenzisa ukulayishwa okuzenzekelayo kunye nokothula inkqubo, kunye nesafet epheleleyo ...
Ukuphosa ibhedi yentsimbi
Ibhedi yentsimbi eyahlulayo inokuxhathisa okungcono, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukuqhubekeka kwinqanaba lokuchaneka okuphezulu; ithiyori, ubunzima besibhedi, i ...
Zenzekelayo umatshini ityhubhu laser ukusika umatshini kukusebenza okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu izixhobo zokusika ezidibanisa ukubala ...
Tube ifayibha laser ukusika umatshini yenzelwe ngokukodwa imibhobho, kulula ukusebenza. Ngomgangatho wokusika olungileyo kunye nokusika ukusebenza kakuhle, ityhubhu f ...
Plate kunye ityhubhu umatshini ifayibha ahlabayo uyakuqonda ukusika izinto ezimbini ezahlukeneyo iimilo kwisixhobo umatshini efanayo. Yamkela, i-rack kunye ne-pinion ...
Itafile yokutshintshana yefayibha laser ukusika umatshini unokunquma uninzi lweshiti zetsimbi, ngakumbi itafile yotshintshiselwano inokugcina ngaphezulu kwe-50% yendawo kunye neendleko ...
Uhlobo Open ifayibha laser ukusika umatshini, umatshini yonke yamkela inkqubo yokubeka kunye pinion drive, ngokukodwa eyenzelwe zonke iintlobo iimakhishithi zesinyithi. Ndi ...
Umatshini wokusika wefayibha ophakamileyo oxhotyiswe ngomthombo okhokelela kwifayibha laser ovelisa umhlaba ovelisa i-laser enamandla egxila kwizinto ...
Indlunkulu yeGuohong Laser Group ibekwe kwiNombolo 1203, eLaser Industrial Park, kwisiThili saseLuohu, eShenzhen. Igxininisa kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa iiseti epheleleyo izixhobo laser. Inkampani inemali epheleleyo ebhalisiweyo ye-130 yezigidi ze-yuan. Guohong Group iye Guohong Laser Technology Hebei Co., Ltd., egubungela ummandla phantse-12,000 square metres, kunye Guohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd., ethatha indawo ka-15,000 square metres. Imitha. Le nkampani iye inani zobugcisa phambili ngamazwe ezifana amandla umphetho welding, ezintathu-chuck online ukusika umbhobho, njl iye iphumelele ishishini eliphezulu-zobugcisa yesizwe, ishishini obalaseleyo zobugcisa lweshishini, ishishini ezibalaseleyo kwiPhondo Hebei, ishishini inkwenkwezi kwiPhondo Jiangsu , ikhontrakthi kunye neshishini elithembekileyo, njl. Iqela laseLuohong Laser ngumatshini omkhulu wokusika umatshini wokudibanisa i-R & D…
Phosa iAluminiyam Beam
Intloko yokusika ekrelekrele
I-Digital Chuck ekrelekrele
Isoftware yokuSika iTyhubhu
Ukunyaniseka kwe-0 eyiyo
Uyilo lobuchule kunye neqela lokwakha
Yiba neqela lokwakha elinamandla; ngokudibeneyo yenza itekhnoloji, isicwangciso sokwakha, kunye neshedyuli yofakelo ngaphambi kofakelo; Ukuqinisekisa inkqubela phambili yeprojekthi nganye.
Uvavanyo olungqongqo ukuqinisekisa umgangatho
Uthotho lovavanyo olungqongqo lwenziwe kwinkqubo yemveliso, kwaye isiseko sokuqinisekiswa kwemveliso sibekiwe kwasekuqaleni kokukhethwa kwezinto zokwenza imveliso. Kwinkqubo, ngokuveliswa kweenkqubo ezahlukeneyo, kunye nokuhlolwa ngaphambi kwentengiso yemveliso egqityiweyo, ibisisiseko ngokusisiseko Oku kungasentla kunika isiqinisekiso esomeleleyo semveliso.
Izixhobo imveliso Advanced, ukunikezelwa ngexesha
Sisebenzisene neenkampani eziphezulu zehlabathi ezingama-500 amaxesha amaninzi, ukubonelela ngeemveliso zesixhobo somatshini ngesiqinisekiso somgangatho ofike ngexesha elifanelekileyo; ukwazisa amaziko amakhulu e-CNC oomatshini amakhulu ukuqinisekisa ukuchaneka kunye namaxabiso afikelelekayo!
Inkonzo elungileyo emva kokuthengisa
Nikezela nge-7 * 24 iiyure zomnxeba wenkonzo, iqonga lokubonisana ngewebhusayithi esemthethweni; Ukuqinisekiswa kwemveliso esemgangathweni, ukuba kuvela iingxaki, nxibelelana nathi nangaliphi na ixesha ukuzisombulula ngexesha; rhoqo (kwisithuba seminyaka emithathu) ukubuyela kubasebenzisi kunye nokubonelela ngesikhokelo sobugcisa nangaliphi na ixesha;
Ukusika i-Laser luhlobo olungadibaniyo, olusekwe kwinkqubo yokuvelisa ubushushu ...
Kubomi bemihla ngemihla, sidla ngokubhekisela kwimibhobho yesinyithi ngokudibeneyo njengemibhobho yentsimbi, bu ...
Xa usebenzisa umatshini wokusika we-laser, iingxaki zihlala zivela ngenxa yexesha elide ...
Ngo-Epreli 22, IE expo China 2021 igqibile e Shanghai, China. Sinawo ...
Laser ukusika ukubuyisela imela yemveli ngoomatshini kunye asiyeibl ...